Imishwana kaPeter Lynch: Okungu-17 okuhle kakhulu, ngubani uPeter Lynch nokuthi utshala kanjani imali | Ezezimali Zomnotho
Lapho sifuna ukufunda noma ukuqala ngesihloko esingakaze sisithinte ngaphambili noma muva nje, into engcono kakhulu ongayenza ukuthola, ukutadisha nokubheka abantu abadumile kuleyo nsimu. Emkhakheni wezomnotho kuyafana. Abatshalizimali abakhulu kanye nosomnotho banezeluleko eziningi abangasidlulisela kuzo, ngakho-ke akukaze kube buhlungu ukusifundela ubuhlakani babo, njengemishwana kaPeter Lynch.
Izimali ziyinkimbinkimbi kakhulu futhi ziyingozi uma kukhulunywa ngokutshala imali. Ngenxa yalokho kufanele sifake konke okusemandleni ethu ngaphambi kokuveza imali yethu ngaphandle kokwazi esikwenzayo. Ngalesi sizathu sinikele le ndatshana emishweni kaPeter Lynch. Ngaphezu kwalokho, sizokhuluma kancane ngokuthi ngubani lo somnotho odumile nokuthi iyini ifilosofi yakhe yokutshala imali.
1 Imishwana engu-17 ehamba phambili kaPeter Lynch
2 Peter Lynch uyaba ubani?
2.1 Ubeka kanjani uPeter Lynch?
Imishwana engu-17 ehamba phambili kaPeter Lynch
Kulindeleke ukuthi, phakathi neminyaka eminingi kangaka yokusebenza emhlabeni wezezimali, uPeter Lynch uqoqe inqwaba yemishwana ethi Zingasebenza njengesiqondisi sabo bonke labo abanquma ukuqala ezimakethe zomhlaba wonke. Ngokulandelayo sizobona uhlu lwezisho eziyi-17 ezinhle kakhulu zikaPeter Lynch:
"Ukhiye wokwenza imali ngamasheya akukhona ukuwasaba."
"Ungalahlekelwa yimali esikhathini esifushane, kepha udinga isikhathi eside ukwenza imali."
“Kubalulekile ukufunda ukuthi kunenkampani exhasa zonke izitoko, futhi kunesizathu esisodwa sangempela esenza ukuthi amasheya akhuphuke. Izinkampani zisuka kokubi ziye ekusebenzeni kahle, noma ezincane zikhula zibe zinkulu. "
"Uma ungazihlaziyi izinkampani, unamathuba okuphumelela afanayo nawokubheja umdlali we-poker ngaphandle kokubheka amakhadi."
Ukutshala imali kungubuciko, hhayi isayensi. Abantu abajwayele ukubala yonke into ngokuqinile basenkingeni. "
"Ungalokothi utshale umqondo ongenakukufanekisa ngepensela."
"Inkampani engcono kakhulu ongayithenga kungaba yilena osuvele unayo kuphothifoliyo yakho."
Ngaphandle kwezimo zezimanga ezinkulu, izenzo zingaqagelwa esikhathini seminyaka engamashumi amabili. Mayelana nokuthi bazokhuphuka noma behle eminyakeni emibili noma emithathu ezayo, kuyefana nokuphonsa uhlamvu lwemali. "
“Uma uchithe ngaphezu kwemizuzu eyishumi nantathu uxoxa ngezibikezelo zezimakethe nezomnotho, umoshe imizuzu eyishumi.
"Uma uthanda isitolo, mhlawumbe uzosithanda isenzo."
Tshala imali ezintweni oziqondayo.
"Ungalokothi utshale imali enkampanini ungazi kuqala izitatimende zayo zezezimali."
«Esikhathini eside, ukuhlangana phakathi kwempumelelo yokusebenza yenkampani nempumelelo yayo emakethe yamasheya ingu-100%. Lokhu kungafani kuyisihluthulelo sokwenza imali. "
"Uma ibhodi lithenga amasheya enkampanini yalo, nawe kufanele wenze okufanayo."
"Akuzona zonke izimali ezifanayo."
"Tshala imali kumasheya ngaphambi kwanoma iyiphi enye impahla."
"Awukwazi ukubona ikusasa usebenzisa isibuko sokubuka emuva."
Peter Lynch uyaba ubani?
Ukuze siyiqonde kahle imishwana kaPeter Lynch, kufanele sazi ukuthi ngubani lo somnotho omkhulu nokuthi ifilosofi yakhe yokutshala imali ingubani. Okwamanje ingenye yemisebenzi yabaphathi bempahla eyaziwayo neyaziswa kakhulu emhlabeni wonke. Uphethe isikhwama iFidelity Magellan, esivelele ngokuthola imbuyiselo yaminyaka yonke engama-29% phakathi neminyaka engu-1977 kuya kowe-1990, iminyaka engama-23 isiyonke. Ngalesi sizathu, uLynch uthathwa njengomunye wabaphathi bezikhwama abaphumelela kakhulu kuwo wonke umlando. Ngaphezu kwalokho, ungumbhali wezincwadi eziningana nezincwadi ezibhekene namasu okutshala izimali nezimakethe.
Ubeka kanjani uPeter Lynch?
Isimiso esithandwa kakhulu sikaPeter Lynch ulwazi lwasendaweni, okungukuthi, ukutshala imali kulokho okwaziwayo. Njengoba iningi labantu livame ukugxila ezindaweni ezithile ezithile, ukusebenzisa lo mqondo oyisisekelo kusiza abatshalizimali ukuthi bathole amasheya amahle futhi angabizi kakhulu. Imibono eqokonyiswe ngusomnotho omkhulu lo Faka imali ezinkampanini ezinezikweletu ezincane, inzuzo yazo isesigabeni sokukhula futhi amasheya ayo angaphansi kwenani langempela lawo. Lokhu kubonakala kwezinye izinkulumo zikaPeter Lynch.
Izingcaphuno zikaGeorge Soros
KuLynch, lo mgomo umele indawo yokuqala yakho konke ukutshalwa kwezimali. Ngaphezu kwalokho, ezikhathini eziningana uphawule ukuthi, ngokusho kwakhe, umtshalizimali ngamunye unethuba elingcono lokuphumelela kanye nokwenza imali kunomphathi wesikhwama. Lokhu kungenxa yokuthi kungenzeka ukuthi uthole amathuba amahle okutshala imali empilweni yakho yansuku zonke.
Ngokuqondene namanye amafilosofi okutshalwa kwezimali, uPeter Lynch ukugxekile kaningi lokho okuthiwa isikhathi semakethe. Imayelana nomzamo wokubikezela amanani ezinto ezizayo. Ngokusho kwakhe, "Kulahleke imali eningi ukuzama ukulungiswa kwemakethe kunokulungiswa uqobo lwayo." Yize kungaveli ohlwini lwethu lwezincazelo ezinhle kakhulu zikaPeter Lynch, akungabazeki ukuthi kukhombisa okukhulu ukwenza.
Ngiyethemba ukuthi lezi zingcaphuno zikaPeter Lynch bezikusiza futhi zikugqugquzela. Ziyizeluleko ezinhle futhi ziyabukeka, ikakhulukazi uma sibasha emhlabeni wezezimali.
Indlela ephelele ye-athikili: Ezezimali Zomnotho » Umnotho jikelele » Izilinganiso zikaPeter Lynch
Ukupakisha nokuthumela: yiziphi izinhlobo ezikhona futhi ezihamba phambili